Vanodzika Dhirowa Slides Vagadziri & vanotengesa - China Undermount Dhirowa Slides Factory
Yakazara yekuwedzera inodzikisira mumhanyi yekutsvedza waya dengu dhirowa
Nhanganyaya:Yakazara yekuwedzera inodzikisira mumhanyi yekutsvedza waya tswanda dhirowa inowanzo shandisa kutsveta waya tswanda dhirowa. Rudzi urwu rwekudzikisira dhirowa inoshandisa masikisi kugadzirisa kune inotsvedza tambo tswanda dhirowa. Kuva neyakakwirira-chaiyo TAIWAI muchina, ine yepamusoro dhizaini timu yedu yakanakisa tekinoroji timu yakanyatso gadzira yakasarudzika uye mutariri weGERISS Hardware inova sarudzo yakanakisa yemakambani epamba fenicha.
Muenzaniso Nha .: EUR33U
Triple yekuwedzera pasi gomo kicheni waya wedhirowa dhirowa
Nhanganyaya:Triple yekuwedzera ezasi gomo kicheni waya wedhirowa dhirowa inowanzo shandisa yewadhiropu waya tswanda dhirowa. Rudzi urwu rwekudzikisira dhirowa inoshandisa masikuru ekugadzirisa kune kabhodhi waya dengu redhirowa. Kuva neyakakwirira-chaiyo TAIWAI muchina, ine yepamusoro dhizaini timu yedu yakanakisa tekinoroji timu yakanyatso gadzira yakasarudzika uye mutariri weGERISS Hardware inova sarudzo yakanakisa yemakambani epamba fenicha.
Muenzaniso Nha .: EUR33U2